25 အံ့ဖွယ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2013 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကမျှဝေခဲ့သည် ၂၅ Awesome Social Media Marketing Tools မှ ၂၀၁၃ လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေး။ ၎င်းသည်ပြည့်စုံသောစာရင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်အမျိုးအစားငါးခုတွင်ပါ ၀ င်သောကိရိယာငါးခု၏ဥပမာများအပါအ ၀ င်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာအချို့သာဖြစ်သည်။
ရူပ - ဤကိရိယာများသည်အကြောင်းအရာတခုနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ က်ဘ်ပါဝင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ ထို့နောက်၎င်းကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော၊ လွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ပြသသည်။ ကိရိယာများ - ကဗျာ, Storify, Curata, ကြီးကျယ်စေ နှင့်ပဲ့တင်သံ။
ဖန်တီးခြင်း - ဤကိရိယာများသည်ဒီဇိုင်းနာများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုမြင်ယောင်စေရန်သင်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ ကိရိယာများ - ဗဟုသုတ, Lingospot, Visual.ly, Prezi.
အကြောင်းအရာစာရေးဆရာများရှာဖွေခြင်း - သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အကြောင်းအရာကောင်းများကိုဖန်တီးရန်သင့်အားတစ်စုံတစ်ယောက်ကအလုပ်လုပ်စေရမည်။ ဤကိရိယာများသည်စာရေးသူနှင့်ဒီဇိုင်နာများကိုသင်စိတ်ထဲထည့်ထားသည့်အရာများစွာကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်။ ကိရိယာများ - စာရေးသူ, မာတိကာ, မိုးကုတ်, zerys နှင့် စာရေးသူ.
ပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူး - ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များသို့ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိပါကကြီးကျယ်သောအကြောင်းအရာများရှိခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ဒီကိရိယာတွေကသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်နှိပ်ပြီးကူညီပေးတယ်။ ကိရိယာများ - buffer, Outbrain, အကြောင်းအရာ BLVD, အရေးကြီးမှု နှင့် OneSpot.
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး analytics နှင့်ခြေရာခံ - အကြောင်းအရာများကိုပလက်ဖောင်းများအနှံ့ဖြန့်ဝေပြီးသည်နှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိရောက်စွာလေ့လာနိုင်ရန်ဤကိရိယာများကိုသုံးပါ။ ကိရိယာများ - ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, အက်ဥပဒေ-တွင်, Marketo, ဉာဏ်ပဂေး, တောင်းပန်ပါတယ်.
Tags: ၂၀၁၃ လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးအက်ဥပဒေ-တွင်ကြားခံအကြောင်းအရာ BLVDအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများမာတိကာcurataပဲ့တင်သံဉာဏ်ပဂေးစစ်ဗိုလ်အရေးကြီးမှုထုတ်ပေးသူဗဟုသုတLingospotကဗျာကြီးကျယ်စေစျေးကြီးOneSpotအပြင်ဘက်မှာခွင့်လွတ်preziစာရေးသူအိမ်မက်Storifyနေခြည်။စာရေးသူzerys
ဇန်နဝါရီ 2, 2014 မှာ 10: 20 AM
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပေါ်အလွန်အထင်ကြီး infographics ။ tools များစာရင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါခြေရာခံနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကိုစာရင်းလိုအပ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်